I-United States ayiyiqondi ncam ukuba yeyiphi ikofu nako incasa efana. Iigrafu zekhofi zazinencasa yeetshiphusi ixesha elide ezinceda ukwandisa inzuzo yeenkampani zekofu. Ndinomhlobo wam owayesebenza kumzi-mveliso wokupakisha owayesebenza kwizixhobo ezazizalisa zitywina izikhongozeli zekofu. Undixelele ukuba batshintshe ii-brand ubusuku bonke, kodwa zange bazitshintshe iimbotyi. Sonke sasondliwa ngokufana, sizifihle kwiitoti zekofu ezahlukeneyo.
Ukuba ucinga njengeliza elitsha, indawo yanamhlanje yee-snobs zokudibana kunye ne-hobnob, ngekhe uqhubeke nenyaniso. Ngaphakathi kwakukhangeleka ngathi ngumzi mveliso oxhatshazwayo… kwakukho ukutyabeka ikofu nothuli lwamandongomane kuyo yonke into oyijongileyo. Ungene nje, wayalela ibhegi yakho yamhlaba, waphuma. Andinalwazi lokuba zivela phi iimbotyi, kodwa zazisoyikeka. Abanini bandifundise malunga nabenzi bekhofi abatsha ngaphandle ngaphandle kwezitshisi kunye neecarafes ezigqunyiweyo. Akukho kofu itshisiweyo. Mmmm.
Malunga neli xesha, ndafudukela eDenver ndaza ndashiya into endayifumeneyo entsha. E-Denver, ndakhangela i-roasters zekofu kodwa zazingafani. I-Starbucks yayifikile edolophini, nangona kunjalo, kwaye ndafumana incasa yeembotyi ezitshileyo zeebhokhwe. Andiqondi ukuba ndakhe ndaziqhela iindleko okanye incasa yezo mbotyi, nangona! Ndichithe imali ephindwe kalishumi kwimali yekofu kunakuqala!
Ukuxhonywa kwi-Starbucks xa beqala ukuvula kwakumnandi kakhulu. Izitulo ezicocekileyo kuyo yonke indawo, ziyenza indawo entle yokubamba iintlanganiso ezingalunganga. Izitulo ezimnandi zamema abantu ukuba bachithe ixesha elininzi e-Starbucks, nangona kunjalo. Ndifundile ukuba iindawo ezininzi zentengiso zibeka izihlalo ezinzima ukuze abantu bangahlali ixesha elide. I-Starbucks itshintshele kwiivenkile ezinkulu kunye nezitulo ezilukhuni kunye nesihlalo esihle sokujikeleza.
UJane unokuba nokuqaqamba kweenwele eziluhlaza kunye nokubhoboza kwindawo ezimbalwa, kodwa njengoko wayetsala umpu, wabukela njengoko wayesenza ubugcisa bakhe. Uya kuxoxa ngezinto ozithandayo nangazithandiyo kukhetho lwesiselo kwaye enze izindululo malunga nawe kubutyebi bakhe bamava. Uziva upholile ngokubakho nje kwaye unikwe ingqalelo. Uziva ukhethekile.
Kodwa imigca ikhule ngakumbi kwaye umgca wendibano kwafuneka ukhule ngokukuko. Oomatshini abatsha baziswa kuloo mhlaba ngokuzenzekelayo, bapakisha kwaye bathululela lo mbumbulu. Umlingo ubungekho ... akukho ukungafezeki, akukho shoti ithatha ixesha elide, imfutshane kakhulu okanye inezizathu ezininzi. Okubi nangakumbi kukuba, i-baristas yaphulukana nolwazi lwabo lobugcisa. IiBarista zazingengaphantsi kwamagcisa kunomntu owayejija iburger kwiKing Burger King yendawo.
Imigca yayinde kakhulu ukuba iqhubeke nencoko. Ii baristas bezixakeke kakhulu ukuba zingakwazi. Utshintsho lweebaristas ezintsha zeza zahamba, i "Barista yakho" ishiywe ingenanto. Ukulwa nemigca, i-drive-through yafakwa. Kukulungele ngakumbi. Iyakhawuleza. Inzuzo enkulu. Abathengi abaninzi.
Ndimamela unomathotholo njengoko bendisiya ndize ndibanike imali yam kunye nomsebenzi wam. Akukho mibuliso, akukho ngxoxo yemozulu. Mna kunye nemoto yam. Umlingo wawungekho. I-Starbucks, amava njengoko ndandisazi njalo, ifile.
Inyani yile yokuba andazi ukuba ndandikhe ndaya e Starbucks yekofu. O-bendifuna ukulungiswa kwam njengaye wonke umntu, kodwa bendithandana nophawu, isitayile, ubuntu bendlu yekofu. Ndandikuthanda ukuya apho kuba ndiziva ndibalulekile. Kwaye xa ndihlawule iidola ezintlanu ngesiselo esikhethekileyo, ndaziva ndibaluleke ngakumbi.
Kwenye indawo apha endleleni, i-Starbucks yaqala ukucheba okhethekileyo ngenjongo yokufumana inzuzo kunye nokusebenza kakuhle. Bayeka ukwenza me ndiziva ndibalulekile. Bayeka ukwenza me ndiziva ndikhethekile. Bayeka ukuba ngabakhethekileyo. I-Starbucks libali elimangalisayo- bayinyusa intengo yesiselo esiqhelekileyo kwaye basifumana sonke. Kodwa abakwazanga ukusigcina. Ukukhula, inzuzo kunye nokusebenza kakuhle kwathatha indawo kwaye ekugqibeleni kwaphanzisa yonke into ngaphandle kweevenkile ezazingafani.
Ndibhala oku ndikwindlu yam yekofu endiyithandayo emhlabeni, eyivenkile yabucala. Ngobu busuku, u-barista wam u-Cassie wabeka ndawonye isiraphu ye-raspberry yase-Italiya kum ngokusekwe kwingxoxo yezinto endizithandayo nangazithandiyo (ukuba uyazi kakuhle). Kwaye u-Alayna undenzele isandwich yenyama yenkomo eshushu eshushu kwi-bagel (hayi kwimenyu).
Ndiyazi ukuba uthetha ukuthini, ndazama i-starbucks "espresso", kuba bendicinga ukuba ngekhe kubekho ndlela yokuba umjikelo omkhulu, owaziwayo unokuba mbi kangako. Kwaye kwaba njalo. Kodwa ndiya kwindawo entle eSydney, apho bayosa iimbotyi kwikhefi, kwaye bandazi ngegama. Ukucima.
Agasti 12, 2008 ngo-5: 02 PM
Ndibe yiBarista phantse ishumi leminyaka. Ndisebenze kwenye yezona venkile zintle zekofu endakha ndaziva, kwaye ndiyibonile into eyenza ukuba ivenkile yekofu ibe ntle. Ndasebenza e-Starbucks malunga neenyanga ezimbini ngehlobo, ndingazi nto ngayo. Mna ayenayo ukuyeka loo msebenzi. Bonke ubuchule endibufumene kumava am njengeBaritsa baphuma ngefestile xa ndibeka ifaskoti. Umsebenzi wam wawungenanto yakwenza nekhofi (eyayiyinto embi nangona kunjalo). Ndingathi malunga neepesenti ezingama-90 zomsebenzi, mihla le, zinento yokwenza nokuthengisa phezulu kwaye "ujonge" uxakekile.
Andazi ukuba kutheni umntu eza kuya kwi Starbucks ngaphandle kokuba abazi ngcono. Kukho iivenkile ezincinci zekofu ezizezabucala ezinetyala kwinto enye nangona. Apho ndihlala khona, akukho ndawo inye yokufumana ikomityi yekofu efanelekileyo.
Ndifumene isithembiso esifanayo nge-imeyile kwaye kuye kwafuneka ndiyeke ukucinga ukuba ndakhe ndaya e-Starbucks ebomini bam kabini ngemini enye.
Agasti 6, 2008 ngo-12: 24 PM
Ndivuma ngokupheleleyo ngengcaciso yakho kwintengiso yeStarbucks. Ndiyakholelwa ukuba abathengi abaninzi phaya ngaphandle bonwabele "amava" e-Starbucks, hayi ikofu. Kuyothusa ukuba banike abantu ngokukhawuleza kangangokuba kufuneka uye kwenye indawo yamava ngoku.
Khange ndiyizame iNdebe yeembotyi okwangoku, kodwa kutshanje ndiyekile yiNkampani yeKofu yeKofu. Ndincoma kakhulu ukuba ubanike umpu ukuba uhlala kwindawo ebanzi yeRipple.
Agasti 6, 2008 ngo-12: 44 PM
Ndikulungele ukuthengisa izabelo zam kwiStarbucks. Andiqondi ukuba banokuchacha. Banokuba ne-brand equity, kodwa xa beqala ukuvala iivenkile ezingamawaka ambalwa, unokubona ukuba iqamza liqhume.
Kule mihla ndizosela ikofu yam ekhaya. Ixabiso eliphantsi kwaye liyonwabisa.
Agasti 6, 2008 ngo-2: 40 PM
Bendihlala ndisebenzela i-Starbucks… Ngoku andisayi kungena kuzo. Ndikhetha ukutyalwa kweKofu apho unoku-odola nantoni na oyithandayo kwaye ii-baristas ziyazi ukuba zithetha ngantoni, ngokungathi kufanelekile! Nabo banasimahla ngaphandle kwamacingo, zininzi iindawo ezintle zokuzipaka, kunye nevenkile emnandi ye-ice cream ngasemnyango. Yimeko yokuphumelela-ngokuphumelela.
Agasti 6, 2008 ngo-3: 33 PM
Ndingumnini wecoffeeshop encinci ezimeleyo kwidolophu encinci (eDillard, GA). Ndingabanika abathengi bam ingqalelo abayifunayo, (okanye imfihlo) andinangxaki ukuba bahlala kwi-WiFi imini yonke kwikomityi enye yekofu, ndilungisa iiodolo ezikhethekileyo ngendlela abafuna ngayo, kwaye babuya ngaphaya ngaphaya! Ndothuka kakhulu, eh? Kweli shishini, njengakuwo onke amashishini, inkonzo YONKE INTO !!!!
Agasti 10, 2008 ngo-4: 50 PM
Ubetha isikhonkwane ebhokisini lika Starbuck kanye entloko. Akusekho buntu apho bekukho khona ngaphambili. Akusekho srevice njengangaphambili. Endaweni yokuvula iivenkile ezibhiliyoni, ngebenze imali eninzi nje ngokwenza ezinye zazo ukuba zikhulu, kunye nabasebenzi. Babecinga uku 'khonkxa' ngekofu engamakhoboka, kodwa babaleka ngokwabo emhlabeni ngokususa yonke into ebenza babaluleka. Ufuna abathengi? Balapha phandle !! Kodwa kuya kufuneka unikeze into ekungekho mntu unayo, kwaye ubuncinci wenze ngathi ngabona bathengi babalaseleyo! Uya kuba nempumelelo okoko ucula imanta… ..inkonzo YONKE into.
Agasti 6, 2008 ngo-6: 46 PM
Inqaku elihle. Ngokwenene "ubethelele isikhonkwane entloko" !! Ndikhetha kakhulu ukuya kwizindlu ezincinci zekofu zabucala. Bahlala bebanzi ngakumbi kwaye bakhonza isidlo sasemini kunye nesangokuhlwa.
Kukho ivenkile emnandi eMunising, eMichigan enendawo yokugcina iincwadi. Ungena, ubeke iodolo yakho, kwaye ungakhangela kwiishelufa zeencwadi zakho ngelixa ulindile.
Agasti 6, 2008 ngo-9: 29 PM
Ndivela kwinkcubeko apho ukusela ikofu kuyinto enkulu, uya kumakhulu eivenkile zekofu, iyalela iCappuccino, i-Espresso okanye iMacchiato engaphantsi kwebhokhwe, ndithetha ikofu esemgangathweni, akukho shmanzy fancy enegama lesiselo esifuna Inkqubo yeRosetta Stone yokufunda iilwimi.
Apha eArizona, i-Starbucks ikuyo yonke indawo yokuthengisa, ivenkile yokutya kunye nakweyiphi na into yokupaka. Ndizifumanisa ndimisa rhoqo kusasa ngenxa yekofu ende kunye noomama bebhola ekhatywayo abafumana isidlo sakusasa sabantwana babo kunye nabantwana babo.
I-Starbucks Ikofu ayinancasa ehambelanayo, ngaphandle kwenyani inencasa embi ngaphandle kokuba ufumane i-5 $ Mocha Cappu? kunye neKarmele.
isenokuba sisicwangciso-qhinga sayo sokuthengisa ukungcamla ikofu embi engaphucukanga ukwenzela ukuba unyukele kwisiselo esiyi- $ 5, oh by the way ungalibali i-fat turkey bacon sandwich… entsha yayo.
UDouglas, enkosi ngomnxeba wokuvuka
Agasti 6, 2008 ngo-9: 33 PM
Undibambe kuyo yonke indlela ngeposi yakho. Ukubhala okuhle. Ndisebenza kuyilo lwewebhu kwibhanki mega, kwaye ndibona ukufana kwexabiso lokuthengisa. Ndiza kukuthumela oku koogxa.
Agasti 6, 2008 ngo-11: 26 PM
Phantse andizange ndiye kwiStarbucks kuba andikaze ndisele ikofu kwaye kutheni ubhatalela i-wifi xa isimahla kwenye indawo?
Kodwa xa ndithetha inyani ndicinga ukuba ingxaki ziintengiso zoluntu. Abatyalomali bahlala befuna ukukhula kwaye bengakhathali malunga nokuncinci okhethekileyo okufunayo kwiinkampani abanesitokhwe sabo. Ukuba isitokhwe sabo asikhuli kwixabiso elikhulu kune-S & P bagxotha ulawulo kwaye bazisa amagqwetha.
Ingxaki nje ukuba ufike kwisikali esithile awungekhe uqhubeke nokukhula kwinqanaba elifanayo. Ngama-95% esabelo sentengiso uza kulifumana phi ukwanda nge-10%? Ke ulawulo luqala ukusika iikona, ukucheba iindleko, ukufumana i-cheesier ngeendlela zayo. Kwaye oko kuyinyani ngakumbi ukuba umseki kunye / okanye iqela lolawulo eline-ethos eliphumeleleyo alisekho kwinqanaba (jonga nje iApple ngeentsuku zikaJohn Sculley.
Ngokwenyani ayikhange ibe yi-Starbucks ukuzibulala, ibiyindalo yerhamncwa leemarike zikawonke-wonke apho abatyali-mali baqhawule umtshato ngokupheleleyo kuyo nayiphi na inxaxheba kwinkampani kwaye bafuna nje ngaphezulu, nangakumbi.
Kwanele ukwenza ukuba ongxowankulu abanengcinga bafune ukuhlala babucala.
Agasti 7, 2008 ngo-3: 15 PM
Uvumile uMike. Umboniso bhanyabhanya omnandi (onezinto ezishiyeke kakhulu embindini kodwa ndonwabile) yi IQumrhu. Umyalezo obalulekileyo emva komboniso bhanyabhanya kukuba iiNkampani zihlala, izinto zokuphefumla ezikhula kuphela kwinzuzo. Akukho lungelo okanye ukungalunganga kwiqumrhu, kunenzuzo kuphela okanye akungenzi nzuzo. Yinto eyoyikisayo leyo kuba iphantse yafa ukusilela kumthengi!
Ndiyavumelana noEric, le ibhalwe kakuhle kwaye ibandakanya iposti yebhlog enendawo efanelekileyo. Into endifuna ukuyazi malunga nesizathu sokuba i-Starbucks ivele kwindawo yokuqala… ingaba abantu abanqwenela ukuziva bekhethekile ukuba kufuneka bahlawule (kakhulu!) Hayi ikofu, kodwa ngenjongo yomntu owenza ikofu? Ngaba ukuthanda kunye nokungathandwa kubaluleke kakhulu kangangokuba ufuna ukuba bamelwe kwikofu yakho? Ndichithe nje iveki elunxwemeni kunye noTatazala wam kwaye wenza eyona kofu imbi ntsasa nganye (Chock Full O'Nuts, kutheni ungayibiza ikofu leyo?) kweyona nto ibalaseleyo endakha ndanayo. Chitha ixesha kunye nemali kubahlobo nakusapho, ziya kukwenza uzive ukhethekileyo.
Agasti 7, 2008 ngo-3: 12 PM
Izimvo ezinkulu kwaye ndiyavuma. Kukho incwadi apho uSchultz athetha khona malunga nezindlu zekofu eziba 'yindawo yesithathu'. Yindawo apho sidibana khona nabahlobo abangaphandle komsebenzi nangaphandle kwekhaya lethu. Ibe yindawo yebar okanye indawo yokupapasha apho kwenzeke khona oku, kodwa i-Starbucks iyithathile.
Amava am are nabahlobo kunye nosapho- kodwa ihlala ikwindawo efudumeleyo kude nekhaya enika iimvakalelo ezinamandla. Sisezindlwini zethu nasemsebenzini wethu yonke imihla… sidinga kwenye indawo esinokuya kuyo. Ixesha elininzi, loo ndawo yayiyi-Starbucks.
Agasti 7, 2008 ngo-12: 12 PM
Kwaye awazi ukuba kunzima kangakanani kwi-barista yezobugcisa yokwenza utshintsho olukhulu (ngenxa “yezoqoqosho”) ukusuka kwivenkile yekhofi ekuyo apho anokuba neenwele eziluhlaza, ukugqobhoza, kunye nobugcisa obugqibeleleyo kumatshini ozenzekelayo Ihlabathi le-Starbucks ... Iyasondela.
Agasti 7, 2008 ngo-2: 39 PM
Ndicinga ukuba umsinga uyatshintsha kwaye ujonge phambili ekubeni nemesti enjengaleyo undigalele ngenye imini!
Agasti 7, 2008 ngo-1: 03 PM
Hah. Uhlala e-Indianapolis. Khange ndiye kwiNdebe yeembotyi ixesha elide.
andikaze ndiye kwi-starbucks. Ndiyathemba ukuba ndiza kufa ndingazange ndibe ne- $ 5 yesiselo sekhalori esenziwe kwi-starbucks.
ndisela ikofu. mnyama. I-yuban ibonakala ilungile kwivenkile yokutya. nembiza kwasekuseni ilungile nanini na emini xa uyiphinda kwi-microwave.
ndicinga ngokufumana umenzi wecofi waseFrance. Lo iya kuba ngumhla xa nam ndiyintonga yekofu.
Agasti 8, 2008 ngo-2: 47 PM
Kunye nokuba esidlangalaleni, yinxalenye ye-high tech / high touch conundrum. Kwaye kubonisa ukuba ingakanani imeko yokwenyani yoluntu ekuhlaleni. Abathengi bethu eRubicon bafuna uqhagamshelo kunye neengcebiso kunye nokuqonda kunye nendlela yokusebenza xa besebenza nathi.
Nantsi into endiyithathayo ekuhlaleni - http://tinyurl.com/58skzn
Agasti 8, 2008 ngo-2: 49 PM
Iposi enkulu. Oku kuye kwajika yaba yenye yeebhloko endizithandayo ukuba zifundwe!
Ndiya e-Starbucks kuphela xa ndilibale ukuseta imbiza yam yekofu kubusuku obungaphambili. Umzila wokuqhuba ulula ngokusebenza ekuseni. Inye into onokuyithetha nge-wifi yasimahla kukuba ayizizo zonke ii-Starbucks ezisenayo kwakhona. Ndiye ndaya kuWifi kwenye indlela kwiveki ephelileyo kwaye ndaphoxeka kakhulu. Ndiyakholelwa ukuba i-Starbucks yenye yeenkampani ezininzi ezilahle nje indlela yazo ngelixa zikhula ngokukhawuleza.
Agasti 8, 2008 ngo-4: 28 PM
Lixabise ukuncoma, Kyle!
Inqaku elimangalisayo. Kukho isifundo esinzulu nesithozamisayo kuwo onke amashishini afuna ukuqhubeka nokukhula ngokukhawuleza nangakumbi… ..tyebe ngakumbi nangakumbi. Yayiyincoko emnandi yencoko kwiNdebe yeembotyi. Bendingazi, ukuba imibuzo yam kwizinto zeWebhu iya kundibuyisela kulwazi olulungileyo lokwenyani. Enkosi.
Jonga ngeenxa zonke.
Agasti 10, 2008 ngo-11: 48 PM
Unyanisile. Andizange ndibe ngumtshatsheli we-Starbucks kwindawo yokuqala. Ngexesha lokufika kweTerre Haute, yayisele iyinto edibeneyo. Ukuhlala uhlala eTerre Haute, yibetha indawo yeKafesi okanye iJava Haute. Zombini zisengabanini beendawo kwaye benza isihogo esinye sekhofi engafezekanga. Nangona kunjalo nangona kunjalo, ndikubonile ukurhweba kwaba babini. Bobabini bafuna ukukhuphisana ne-Starbucks kwinqanaba elithile kwaye andibagxeki. Zintathu iirandi apha ngoku kuthelekiswa nezinye iivenkile zekofu zalapha. Leyo pie encinci ukusika.
Agasti 11, 2008 ngo-11: 19 PM
Kufana nebhendi yakho oyithandayo. Ekuqaleni, uyathanda ukubabona bedlala kuba badlala kwindawo apho ungaya khona kwaye uzonwabele nabahlobo neziselo kwaye badlala umculo omnandi. Ingathi bafaka umboniso kuwe. Emva koko bafumana ukwaziswa ngakumbi kwaye wonwabile kuba banevidiyo yomculo kwaye bathengisa amanye ama-albhamu. Ke iyadika kuba iingoma zabo zibhalwe ngokudibeneyo ngabavelisi abakhulu kwaye badlala amabala emidlalo amakhulu apho isandi esoyikeka kwaye indawo yokupaka ihamba ngokukhawuleza nge-5 yeekhilomitha ukuya kwindawo. Yonke into elungileyo iyadlula… yonwabele ngelixa usenakho!
Inqaku lakho lichanekile kanye kuloo ndawo. Akusekho amava e-Starbucks, kwaye andikaze ndiyithande imbotyi etshisiweyo ukuqala kwayo.
Ke mhlawumbi ivenkile enkulu, enesibindi yokuthengisa ikofu iya kuvula kwenye yeendawo i-Starbucks iphuma kuzo, kwaye ibabonise indlela ekufuneka yenziwe ngayo!
Agasti 12, 2008 ngo-1: 41 PM
Nam ndiyazithanda “iivenkile zekofu zokwenyani” (i-Starbucks, ubuncinci kum, ayifanelekanga). Ndihlala kwindawo ezininzi… bonke bakhonza urhwebo oluqinisekisiweyo, umthunzi wekofu. Kukho into ephantse yenze imilingo malunga nenkampani enkulu, ikofu entle (engaphezulu kwexabiso elifanelekileyo kwaye ayitshabalalisi amahlathi emvula KUNYE ixhasa abalimi), kwaye ngaphandle kwamacingo ...
eMelika bendihlala ndisela ikofu kuphela kwiiStarbucks. Ndiyayithanda iatmosfera
Ewe, andizange ndiyithande ngokwenene i-Starbucks, kodwa kwakungcono kakhulu ngaphambili-nangona iivenkile zaseMassachusetts zonke zibonakala ziyindlela oyikhumbulayo. Nokuba yeyiphi indlela, ndicinga ukuba iyanceda ukugcina iivenkile ezincinci, zibuthathaka njengoko zihlala kunjalo.
Agasti 13, 2008 ngo-11: 54 PM
Ndisuka eWashington State, umhlaba weevenkile ezi-5 zekofu kwikona nganye. Indawo yabo entsha yezona ndawo zincinci yivenkile yeKofu yeWoods. Bafumana iisofa ezibutofotofo yindawo yomlilo eqingqiweyo kunye nokudityaniswa okukhulu kwemidlalo yebhodi. Kukho amaqela aphelileyo ngeempelaveki kwaye ewe ungenza umsebenzi wakho apho.
I-Starbucks ayisasebenzi ngaphezulu, ilunge ngakumbi. Kungekudala ngokwaneleyo ukulungiselela kwabo kuya kunxiba ngokupheleleyo. Andikhange ndityelele i-Starbucks kwiinyanga. Andikwazi kumela iziselo zabo ezinxilisayo kunye nokuzimasa okungafunekiyo. Akukho mntu uya kwikofu yokwenyani… Banokwenza ngcono ukuba bayavuma ukuba ngenene benza iilekese kwindebe ezele ngumsindo.
Ndiyakhumbula xa ii-starbucks zaqala ukuza apha. Kwakukho iivenkile ezininzi ezincinci zokumisa ikofu kunye nesandwich, kwaye bazibeka ngaphandle kweshishini.
I-Starbucks yayimalunga nokwenza uphawu kunye nokuxhatshazwa. Buza nabaphi na abahlali baseNew Hope, PA ukuba baziva njani xa i-starbucks yonke kodwa inyanzela ivenkile yabo yendawo ukulungiselela abakhenkethi kunye neendwendwe.
ii-starbucks ziphumelele ngokutya abantu abafuna into eyahlukileyo, bakhule ngokuziva bekhulile kwaye bekhethekile, emva koko bazikrola emqaleni ngokuyeka konke kuye entloko. Ngoku yingxelo yefashoni kunye nenye ileyibheli yoyilo.
Jonga nje inani lee-iPhones oza kulibona lisetyenziswa apho, kunye nenani leebhegi zoyilo, kunye nee-macbook. Akuthathi xesha lide ukufumana uninzi lwabantu abaya apho ukubonisa indlela abapholile ngayo. Uninzi alunakuyazi i-espresso efanelekileyo okanye i-cappuccino ukuba ngaba i-barista encinci enetalente eneenwele eziluhlaza kunye nokugqobhoza bayiphosa ebusweni ngenxa yokucaphuka.
Elinjani ukuba libali elilungileyo - into enokuthi iivenkile ezihamba nazo zenze ukuba abasebenzi babo bafunde.
Andizange ndifumane incasa ye-Starbucks, ndikhetha ukuyilahla i-1.50 yeedola kwikomityi enkulu yekofu ekhanyayo yePanera Bread. Kananjalo, iPanera ayikhe ihlawulise ukufikelela kwi-intanethi, isenza iivenkile zazo zibe yindawo efanelekileyo yokuxhoma.
Ngaba iPanera ilungile? Hayi. Njenge Starbucks bahamba rhoqo kubasebenzi nakulawulo lotshintsho ngamanqanaba emigangatho eyahlukileyo mihla le.
Ndicinga ukuba yiyo loo nto ndikhetha ukwenza nokusela ikofu yam ekhaya.
UDoug, isishwankathelo esihle endivumelana naso kubo bobabini abathengi kunye nentengiso.
Ababini babantwana bam bebengabarista (hayi kwiStarbucks) kwaye esi sisihloko esishushu abo bangaphakathi kwinkampani abangakwazanga ukusiqonda. I-Starbucks (kunye nazo zonke iivenkile zekofu) kufuneka ijolise kumava apheleleyo. Ngaphandle koko, kutheni uhlawula amaxabiso aphezulu?
Agasti 15, 2008 ngo-4: 33 PM
ME: OBEKUYI-SEATTLE STARBUCKS BARISTA
Iposi elungileyo Doug! … Kuyafana naseSeattle. Ndiyabulela uthixo kusoloko kukho iivenkile zekofu “zokwenyani” ezingcono. Ewe, i-Starbucks inkulu kwaye ihlala ixakekile, kodwa inkonzo kunye nomgangatho wazo zihlala ziwa.
Agasti 15, 2008 ngo-10: 37 PM
Uhlalutyo olulungileyo lokuba uphawu lwenziwe njani, kwaye ndiyakholelwa, ilahlekile. Kudala ndibukele oku kule minyaka imbalwa idlulileyo. Into eyake yakha yangamava eyenza i-Starbucks eyahlukileyo yalahleka njengoko ikhonkco lalingananzanga kwindlela abaphathwa ngayo abathengi. Yaba yinto engenamntu, eyona nto iphambili kuyo kukuqhuba. Ungaqhuba ngeMacDonalds kwaye ufumane ikofu. I-Starbucks yayingasekho "kwindawo yesithathu."
Enkosi kuhlalutyo olunomdla.
Agasti 16, 2008 ngo-2: 38 PM
Ndingumfundi webarista eStarbucks. Ndisebenze apho iminyaka emi-2 kwaye ndibala… usuku lwam lokugqibela lungoMgqibelo olandelayo. Ayisiyiyo kuphela ukuya esikolweni, kodwa ndiyagula yi-Starbucks. Ndingadlulisela kwivenkile ekwindawo endizakufunda kuyo isikolo, kodwa andinamnqweno wakwenza oko.
Ndandiwuthanda umsebenzi wam. Bendihlala ndiyithanda ivenkile yam. Bendihlala ndiyithanda i-Starbucks. Ndiqale kwivenkile elungileyo yokuphembelela eGresham, OKANYE. Bekuxakeke ngokufanelekileyo, kodwa bendinalo ixesha lokwazi kunye nokonwabela abathengi bam, kwaye bendinalo ixesha lokwazi kunye nokonwabela abantu endisebenza nabo. Ndingayichazanga eyam umphathi ibiyenye yohlobo. Ke kuye kwafuneka nditshintshele kwivenkile eVancouver, WA. EVancouver, ndisebenza kwivenkile edume kakhulu ethi "isoloko ixakeke ngokwenyani" (ndiyifumana kuye wonke umntu endixelela ukuba ndisebenza kweliphi ivenkile). Ukuxakeka ngokwenyani yinto ephantsi kwaye siyimbonakalo ye Starbucks othetha ngayo kwinqaku lakho, kwaye ndonele. Kukho iivenkile ezinkulu zekofu zasekuhlaleni, kwaye ndiyakonwabela ukuya kuzo kunokuba ndiye kwinkampani yam! Olu lusuku olubuhlungu kwi-Starbucks xa abasebenzi bakho bengakuniki ixesha losuku.
Ukuzikhusela kwam kunye nokunye kwe-Starbucks baristas, sisebenza kakuhle noko sikunikiweyo. Andizukukhupha uphondo lwam, kodwa emva kweminyaka emibini, ndingumntu omkhulu. Ndizikhathalele iziselo endizenzayo kunye nabathengi endibanika bona. Ndithatha ixesha lokuncokola nabathengi bam kwaye ndibazi xa bekwifestile yam yokuqhuba okanye kwikhawuntari yam ngelixa ndisebar. Ndiyazi ukuba uninzi lwe baristas luthathe u "burger-flipping" kwaye babeke ecaleni uthando lwabo lomsebenzi, kodwa uninzi alukwenzi kwaye ngabo ababambe okuseleyo kwe Starbucks kunye.
Ngokwam, ndilahlekelwe lukholo kunye nothando lwam kwi-Starbucks kungekuphela ngenxa yokuba ivenkile yam yivenkile yokutsha, kodwa ngenxa yendlela esiphathwa ngayo njengabasebenzi. Mhlawumbi yivenkile nje yam, kodwa imbi kakhulu apho kwaye ngenxa yayo kwaye igcina njengayo, i-Starbucks iye yaba ngumkhombe otshonayo. Ndiyasebenza naseRed Robin kwaye ndinyangwa kakuhle apho. Ngapha koko ndiyawuthanda umsebenzi wam phaya. Ndiyakuthanda ukuya emsebenzini kwaye kundenza umqeshwa ongcono ngenxa yayo.
Ndilwenzile lonke uqeqesho kunye nokugcuma okwenziwa nguWoward Schultz kwangoko kulo nyaka kwaye ekuqaleni bendiyi-gung-ho, kodwa ndaye ndaphelelwa lukholo kwaye ndayeka ukuyeka umsebenzi kwaphela. Inqaku lakho lelinye ekufuneka lifunyenwe nguSchultz. Ke mhlawumbi iyakuba yifowuni yokuvuka ayifunayo.
Uyazi ukuba uzixelela njani ukuba ufunda kuba uneencwadi zakho zokuqinisekisa ezivulwe phambi kwakho? Kodwa ngaba ucofa ngokwenene kwiStumble upon ukuze ufumane izithuba ezinomdla zokufunda?
Ewe kulungile, ndifumene eyakho kwaye kuye kwafuneka ndibhalele ukukuxelela ukuba ndiyonwabele kakhulu. Ndiyinike oobhontsi phezulu, ukuze abantu abaninzi bakwazi ukuza nayo kwaye bayonwabele.
Uyayazi into endothusileyo. Ulunge kangakanani umgca weMc Cafe. Ikofu kaMc Donald engaphezulu kwe- $ 3 indebe ibonakala ngathi incinci.
Emva kokuyizama ndidakumbe ngokudabukisayo kwaye bendisiya apho ngakumbi nangakumbi kwangoko.